Ịgbasi Mgba Ike na ala ohere nchekwa na gị iOS9 ngwaọrụ? Ọfọn, nke a bụ ikpe na ọtụtụ ndị ọrụ, nyere na ọ dịghị nhọrọ nke ịgbasa ebe nchekwa ọ bụla nke Apple ngwaọrụ. N'ihi gịnị ka ọ eme ezie na ohere na-aghọ otu ihe iseokwu n'ihi na ọtụtụ nke iOS ọrụ? iOS na ngwaọrụ ndị otu nke kasị mma si n'ebe na-echekwa na-ege ntị music, kpọọ vidiyo na pịa foto. Ndị a niile na-eme bụ nnọọ ohere ewe na na ofu ebe nchekwa na iOS ngwaọrụ, nchekwa mee elu mee ma ọ bụ mgbe e mesịrị na-ebelata maka onye ọ bụla. Ọzọ mere nwere ike ịbụ a otutu nke na-achọghị ngwa ọdịnala na ngwaọrụ gị, na-eri n'ime dị nchekwa.
Ugbu a, na anyị maara na ihe na-eduga ná belata ohere na iOS ngwaọrụ, ka anyị ịme ka ị ngwọta kasị mma maka gwakwara elu a furu efu ohere; izute Wondershare SafeEraser, ngwa na nwere ike ngwa ngwa onwe elu na ebe nchekwa na gị iOS ngwaọrụ site na iwepu achọghị cache, ghara ịdị irè faịlụ na ndị ọzọ.
Ebe a bụ a zuru ezu ndepụta nke ihe nile a ngwa nwere ike ime ka gị.
• Ihichapu gị onwe nkọwa kpamkpam na ọ bụghị naanị ihichapụ ha
• hụ na gị na data (weebụ nchọgharị, ozi, ngwa na ị na-eji wdg) na-anọgide onwe na unrecoverable
• enyere na kpamkpam erasing ngwaọrụ gị bụrụ na ị na-eche echiche nke na-ere, imegharị ihe maka iji ma ọ bụ erekwa ya
• Wepu niile junk (achọghị faịlụ na ngwa ọdịnala)
• akwado ogologo ndepụta faịlụ na ụdị
• zọpụta na ohere nchekwa maka ngwaọrụ gị site compressing photos
3.481.186 ndị ebudatara ya
Olee otú na-
1. Doro Anya junk faịlụ
• Download na wụnye Wondershare SafeEraser na ẹkedori ya. Pịa 'Express nzacha na mkpocha' nhọrọ.
• See button Malite iṅomi na-amalite ịgụ isiokwu maka junk faịlụ gị iOS ngwaọrụ. Ozugbo Doppler zuru ezu, SafeEraser ga-egosipụta a ndepụta nwere niile junk faịlụ na nwoke nke ukwu nke ndị dị otú ahụ faịlụ.
• Họrọ na-achọghị ụdị faịlụ na pịa ihichapu Ugbu a. Nke a ga-ọcha nile junk faịlụ site na gị iOS ngwaọrụ ma gosipụta pụta nke Hichaa na-esonụ window. Ma ọ dị mkpa, ị pụrụ ọbụna pịa ọ bụla faịlụ ụdị ịhụ nkọwa ndị ọzọ na onye junk faịlụ na naanị họrọ ihe ị chọrọ wepụrụ na ehichapu ya.
2. Wepụ ejibeghi ngwa
• Mwepụta SafeEraser na pịa on 'ejibeghi App Eliminator'. On n'aka nri n'akụkụ nke window, pịa bọtịnụ Malite iṅomi na-amalite na-achọ niile ejibeghi ngwa ọdịnala na gị iOS ngwaọrụ.
• The ọzọ window kwesịrị igosi na Doppler ọganihu ugbu a na kwesịrị imecha sekọnd ole na ole naanị.
• Na ọzọ window nke na-egosi na Doppler results, nile ngwa ọdịnala na-adịghị e ji mee nke ikpeazụ ụbọchị 30 ga-gosiri.
• Site ndabara, nile ngwa ga-enyocha / họrọ ugbua, ị nwere ike họrọ ndị na ị chọrọ wepụrụ wee pịa bọtịnụ Uninstall na-amalite wepụ ndị a ngwa ọdịnala.
• Ozugbo mere peeji na-esonụ ga-egosi gị results na ego nke uwa na ị bụ ike ịzọpụta na usoro.
3. Doro Anya ehichapụ data kpamkpam
• Site n'aka ekpe mmanya, họrọ ihichapu ehichapụ faịlụ wee pịa Malite iṅomi dị ka niile gara aga nzọụkwụ.
• Ozugbo Doppler zuru ezu, ị ga-ahụ ndepụta nke niile ehichapụ data ụdị na ọnụ ọgụgụ nke faịlụ na onye ọ bụla n'ime ha. Họrọ ndị ị ga-achọ ka ihichapu kpamkpam na iti na bọtịnụ ihichapu Ugbu a.
• The peeji na-esonụ / window kwesịrị gosi ihe ịga nke ọma mwepụ nke niile data dị ka mkpa.
4. mpikota onu photos ịzọpụta ohere ruo 75%
• Họrọ 'Photo Compressor' site n'aka ekpe sidebar menu na iti on Malite iṅomi na-amalite ịgụ isiokwu maka nnukwu foto gị iOS ngwaọrụ.
• The peeji na-esonụ, otu ugboro Doppler zuru ezu, ga-egosi gị niile foto na dị nnọọ ukwuu na-enye gị ihe atụmatụ na ole ohere ị pụrụ ịzọpụta site compressing ha.
• Cheta na ọ bụrụ na ị pịa ndabere Path (ọzọ na button 'mpikota onu now') Ọ ga-egosi na ị na ndabere ọnọdụ / ndabere ụzọ niile mbụ foto na ka ị họrọ a njedebe nke gị onwe gị na-ahọrọ ma ọ dị mkpa. Ozugbo mere, pịa OK na mgbe ahụ 'mpikota onu now' na-amalite compressing foto.
• Ugbu a, usoro nke compressing kwesịrị na-ewe sekọnd ole na ole na mgbe ahụ na-egosipụta na ya pụta na peeji nke maka gị.
> Resource> Clean-elu> Olee onwe elu karịa Space na gị iOS 9 Ngwaọrụ